Madaxweynaha Galmudug oo kasoo horjeestay liiska xildhibaannada Baarlamaanka – Kalfadhi
Madaxweynaha Galmudug oo kasoo horjeestay liiska xildhibaannada Baarlamaanka
Guddiga Farsamada ee Maamul dhisidda Galmudug ayaa shalay soo saaray Liiska illaa 83 Xildhibaan ee Baarlamaanka Galmudug oo ay soo xuleen Odayaasha Dhaqanka, iyadoo shaxda Liiskan ay ku qoran tahay saami qeybsiga Beelaha iyo sida ay u kala heleen kuraasta.
Illaa Lix kursi ayaa ka harsan Liiska la soo bandhigay ee 83 Xildhibaan ku jiraan, sida muuqata kuraastaas waa kuwo la isku haayo oo is qabqabsi uu ka taagan yahay cida la siinayo.
Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf, ayaa ka soo horjeestay liiskii Xildhibaannada Baarlamaanka ee shalay la shaaciyay, isagoo ku tilmaamay inay aheyd mid been abuur ah.
Madaxweyne Xaaf oo bilo ka hor waxaa uu shaaciyay in dhismaha maamulka Galmudug uu u wakiishay wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dowladda Dowladda Federaalka.
Qoraal ka soo baxay Xafiiska Madaxweyne Xaaf oo maalmahan ku sugan Gaalkacyo ayaa lagu sheegay inay la xisaabtamayaan ciddii soo saartay liiska been abuurka ah.
Waxaa uu wax lala yaabo ku tilmaamay in liiska la soo saaray shalay ay u hambalyeeyeen Xildhibaano ka soo jeeda Galmudug oo saddex sano mucaarad ahaa, kana soo horjeeday fashilka iyo musuq maasuqa xukuumadda dalka.
Mudane Xaaf, ayaa sheegay in uu cambaareynayo liiska xildhibaannada islamarkaana uu kala xisaabtami doono, ciddii soo saartay liiska xildhibaanno uu ku sheegay been abuur.
Liiska la soo bandhigay ayaa waxaa ku jira 20-kii kursi ee ay soo xusheen Ahlusuna, kuwaasoo la aqbalay todobaadkii hore.
Madaxweyne Saciid Deni oo sheegay in Puntland aysan qeyb-ka aheyn Sharcigii Badroolka ee Baarlamaanka Federaalka uu ansixiyay